Ufa yidolobha nge ifa zomlando namasiko ocebile. Lapha, iminyuziyamu eminingi, okuyinto Kungenzeka ube nentshisekelo ngokuvakashela yisiphi isihambi abafika lapha ngempelasonto. Ake sibheke izindawo ayinhloko kumelwe ukuba uvakashele kuleli dolobha.
I National Museum
Republic of Bashkortostan National Museum yasungulwa ngo-1864 futhi ingenye endala eRussia. Okwamanje, kunezinhlobo ezingaphezu kuka-130 izikhumbuzo isiko le ndawo, imibukiso elithakazelisayo ezembula umlando esifundeni.
Museum ihlukaniswe 4 izingxenye: umlando, nemvelo, imivubukulo futhi ethnography. Ngokuvamile, ukuchayeka afakwe 34 bayabhema.
National Museum of Republic of Bashkortostan oluyohlala izivakashi yayo amasevisi alandelayo:
inhlangano iqembu nezinhlelo uhambo ngabanye;
kokuqhuba izifundo olunzulu amahholo lapho embukisweni ezibekwe;
ukuhlela imihlangano, imihlangano nezingqungquthela;
isethulo umsebenzi wabo siqu.
Nesterov Museum in Ufa
Art Museum lakhiwa ngo-1913 ekuthatheni isinyathelo lendawo ugodo yomthengisi nabadumile yomthengisi Laptev. Waqamba igama layo ngemva umdwebi odumile futhi ongowokuzalwa M. V Nesterova. Kuyinto ubuqambi umculi lingelayo imisebenzi engaphezu kwekhulu evezwa Museum. Ngokuvamile, ukuqoqwa izikhungo yesimanje ine kuka 4,000 ziphephile buciko kuqoqwa lonke izwe.
History Museum (Ufa), kuyoba mnandi ukuvakashela izivakashi edolobheni, abafisa bajwayelane okutholakele okutheni namagugu ethnographic of Bashkortostan. Lapha izivakashi alindele zobuciko kweziningi ezisekhona kusukela Stone Age. Lokhu, ngaphezu kwakho konke, abantu bomdabu izinto esifundeni yasendlini, amathuluzi, izinto zokubhukuda, ubucwebe, izikhali zabantu lasendulo. Phakathi embukisweni ihholo elikhulu Museum ubuye lwamathambo wangempela Khazar mammoth.
Fire Mnyango Museum
Lapho ngihlola Museum ku Ufa, omunye awanakuziziba endaweni enjalo elithakazelisayo anikezelwe ukuvikelwa umlilo edolobheni. izindawo izivakashi ukuchaza indlela yokubhekana umlilo lokulwa imishini, yini okufanele uyenze ngaphambi kokufika abatakuli kanjani ukuze kuphunywe abantu abavela izakhiwo ukuthi baye bathola nomlilo.
Yiqiniso, izethameli esiyinhloko Museum esizukulwaneni esisha. Okungukuthi izingane, ngokuyinhloko unesithakazelo ziphephile. Imininingwane sifaneleka ikakhulu ukuthi ingatholakala ngokuhamba nohambo, kuyoba izingane ngempela okwamanje. Phela, izivakashi abasha kubaluleke kakhulu ukuba siqonde ukuthi kungani akufanele ukuntela ngomentshisi, usule izinto zikagesi eziphezu, igesi izitofu.
Okunye eminyuziyamu Ufa akakwazi ukutshela imininingwane eminingi ngendlela insimu ka Bashkortostan ukuthuthukisa abantu bavikelekile ezingozini zomlilo. Lapha ungakwazi ukubona ziphephile eliyingqayizivele ngezinhlobo zawo, isibonelo, imishini umlilo-elwa nobuchwepheshe okungokukaNkulunkulu kwezinkathi ezahlukene.
Sibheka eduze iminyuziyamu ku Ufa, kufanele sibheke e igalari, esichasiselweni anikeza bahlole izitayela ezintsha e wesimanje art, ebaziwe yokwakha.
Umqondo ukuhlela esinjalo wakuqala nokuqukethwe kwalo Museum kungokwalabo umphakathi we Ufa abaculi. It waqalwa ngo-1992. Kamuva isikhungo wathenga ngumuntu umculi wendawo nosomabhizinisi Maxim Kholodilin. Kusukela ngaleso sikhathi, igalari seyaziwa ngokuthi ama-X-Max.
Ukuvakashela eminyuziyamu Ufa, ngempela uhambo ngokusebenzisa le igalari, lapho indawo 100 m2 ihlelwe embukisweni zendalo engcono abaculi zendawo ngokuvakashela. Kukhona imicimbi ngokwesiko labetibambile eziphathelene yazi labantu nge ukubukwa ezintsha ekuthuthukiseni ubuciko ahlobene. Aphethwe igalari njengoba kusihlwa tetemibhalo, amakhonsathi, imidlalo yaseshashalazini, imihlangano nge abalobi ezidumile, izintatheli abaqavile emphakathini.
Kulesi sihloko lalibhekwa kuphela labo kumamyuziyamu zokudala Ufa, okuyizinto abangela isithakazelo esikhulu phakathi izakhamuzi nezivakashi. Eqinisweni, kunezinhlobo ezingaphezu kuka-20 amasayithi abavakashela indawo yayo izinkambo, okuhloswe ngaso ekwetayeta ne umlando, amasiko nendlela yokuphila esifundeni. iminyuziyamu kakhulu e Ufa itholakala engxenyeni ephakathi ye edolobheni. Ngakho uma ufuna, ungakwazi kalula uthole emini.
Inketho "Yonke indawo njengasekhaya" - izici. Indlela yokuxhuma nokukhubaza inketho "Yonke indawo ekhaya"?